‘स्मार्ट सिटी’ हुन्छ चाहिँ कस्तो? - Worldnews.com
‘स्मार्ट सिटी’ हुन्छ चाहिँ कस्तो?
चुनावअघि घोषणा गरिएझैं “राम्रो
दलहरुको चुनावी तयारी कस्तो छ?
दलहरुको चुनावी तयारी कस्तो छ र उम्मेदवार कस्ता छन्?...
सुरेन्द्र कार्की र निश्चलनाथ पाण्डेसँग
6 नोभेम्बर 2016 कतिपयले आरोप लगाएझैं नेपाल सरकार...
प्रकाश ज्वाला र विद्याधर मल्लिकसँग
कर फर्छ्योट आयोगद्वारा दिइएका छूटमा अर्बौं रुपियाँको हिनामिना भएको आरोपमा...
ध्रुवीकरणले चुनावमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
राजनीतिक ध्रुवीकरणले चुनावमा कस्तो...
के कस्ता छन् दलका चुनावी मुद्दा?
चुनावमा दलहरुले के कस्ता...
क्लिन्टन र ट्रम्पबीच आरोप प्रत्यारोप
आगामी नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावअघि भएको पहिलो प्रत्यक्ष बहसमा डेमोक्र्याटिक पार्टीकी हिलरी क्लिन्टन र रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पले एकअर्काको चर्को आलोचना गरेका...
आगामी नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावअघि भएको पहिलो प्रत्यक्ष बहसमा डेमोक्र्याटिक पार्टीकी हिलरी क्लिन्टन र रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पले एकअर्काको चर्को आलोचना गरेका छन्। टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उक्त बहस अर्थतन्त्र, कर प्रणाली, जातिगत मुद्दा र सुरक्षामाथि केन्द्रित थियो। क्लिन्टनले बोल्दाखेरि कयौंपटक ट्रम्पले रोक्ने प्रयास गरेका थिए। आरोप प्रत्यारोप क्लिन्टन...
दमास्कसका सडकहरू अरू दिनजस्तै सामान्य देखिन्छन्। जाँचस्थलमा सुरक्षाकर्मीहरू सामान्य अवस्थामा देखिन्छन् र अरू दिनहरूको भन्दा सुरक्षा जाँचमा कडाइ गरिएको छैन। पसलहरू खुला छन् र मानिसहरू काममा गइरहेका देखिन्छन्। सिरियाका तीन ठाउँमा हवाई हमला सिरियामा युद्ध किन? सिरियाली टेलिभिजन भवन रहेको दमास्कसको मुख्य चोकमा...
निलम्बित महानिर्देशक शर्माको मुद्दा आज बृहत पूर्ण इजलासमा बहस हुँदै
काठमाडौ (नेस) । सर्बोच्च अदालतमा बृहत पूर्ण इजलाशमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको मुद्दा पूर्ण इजलासमा बहस हुँदै। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगले शर्मालाई गत जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अयोगले विशेष अदालतमा शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध...
हाकिम कस्तो हुनुपर्छ?
विश्व हाकिम दिवसका दिन...
जेकब जुमाद्वारा राजीनामा दिन ‘अस्वीकार’
सत्तारूढ दल एएनसीका वरिष्ठ नेताहरूसँगको आइतवारको वार्तापछि दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति जेबक जुमामाथि राजीनामा दिन दवाब बढ्दो छ। वार्ताबारे बिस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन तर पार्टीका नेताहरूले सोमवार आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। राष्ट्रपति जुमाले भ्रष्टाचार गरेको आरोपहरू झेलिरहेका छन्। गत डिसेम्बरमा सिरिल रामापोसा जुमाको स्थानमा पार्टीका सभापति बनेका थिए। आन्तरिक झगडा बन्द...